सहकारी नीति विधयेक छिट्टै संसदमा पेश गर्न सभामुख नेम्बाङको आग्रह « Sahakari Nepal
सहकारी नीति विधयेक छिट्टै संसदमा पेश गर्न सभामुख नेम्बाङको आग्रह
प्रकाशित मिति : 22 November, 2014 11:01 am
काठमामाडौं, ६ मंसिर । सभामुख सुवास नेम्बाङले राष्ट्रिय सहकारी नीति बिधेयक संसदमा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
श्री लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १५ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा नेम्बाङले नीति छिटो भन्दा छिटो संसदमा प्रस्तुत गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । २ वर्षसम्म पनि नीति कार्यान्वयनको लागि पहल नभएको गुनासो गरेपछि सभामुख नेम्बाङले विधेयक निर्माणका लागि जोडतोडले लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले नयाँ बन्ने संविधान पनि सहकारीमैत्री निर्माण गरिनेमा विश्वास दिलाउनुभएको थियो । सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने भन्दै सभामुङ नेम्बाङले सहकारीमैत्री संविधान निर्माणमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
सहकारीका कमिकमजोरी व्याप्त रहेको भन्दै नेम्बाङले यसका कमिकमजोरी सञ्चालन सहकारी अभियान नै क्रियाशिल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारीका कमजोरी आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन सहकारीकर्मी क्रियाशील हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
सभासद् एवम् नेपाली कांग्रेसका कृषि तथा सहकारी विभाग प्रमुख बालकृष्ण खाणले सहकारीले मानवय क्षमताको विकास गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीका ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर सबैका लागि सहकारी बनाउन लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन छिट्टै परिमार्जन हुनेमा आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले निती कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताउनुभयो । उहाँले छिटो नीति कार्यान्वयनका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले सहकारीमार्फत गरिबी निवारणका कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुुख आधार सहकारी भएको भन्दै उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेलले सहकारीले कृषि क्षेत्रको व्यापक क्रान्ति गर्न सक्ने बताउनुभयो । ऐन संशोधन गरेर सहकारीको लगानीमा फराकिलो बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।
पुल्चोक स्थित श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले यस आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ३ करोड ३९ लाख भन्दा बढि रकम राजश्व बुझाएको छ । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीको समग्र विकासको लागि यस संस्थाले आगामी वर्षमा थप नयाँ योजनाहरुमा लगानी गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
संस्थाले सदस्यहरुको सुविधाको लागि काठमाडौको चावहिल, भक्तपुरको कौशलटार र ललितपुरको चापागाउँमा सदस्य सुविधा काउण्टर संचालन गरेको छ । संस्थाद्धारा लालीगुराँस हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., श्री लालीगुराँस राष्ट्रिय उच्च मा.वि., जय लालीगुराँस इन्भेष्टमेन्ट एण्ड ट्रेडिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. संचालित छन् । नेपालकै सबैभन्दा ठुलो गाई पालन परियोजन संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ चितवनको खैरहनीमा गाई पालन परियोजनाको शुभारम्भ भईसकेको छ ।
यस संस्थाले आ.ब. २०७०/७१ मा ७ करोड ५६ लाख ३७ हजार १ सय ३ रुपैया नियमित कारोबार बाट मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो अवधीमा ५ करोड ६९ लाख ९ हजार ६ सय ८२ रुपैया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ , यो रकम गत वर्षको तुलनामा मुनाफामा १३ दशमलब १७ प्रतिशतले बृद्धी भएको छ । त्यसैगरी, आ.व. २०६९/०७० को कूल कारोबार २ अर्ब ५७ करोड १२ लाख ४१ हजार ९ सय ४४ रुपैया रहेकोमा चालु आ.व. मा २९ दशमलब ७८ प्रतिशतले बृद्धी गरी कुल कारोवार ३ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ६१ हजार ६ सय ५७ रुपैया पुर्याएको छ । संस्थाको आ.व. २०६९/०७० मा २ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ९८ हजार ४ सय ३६ रुपैंया निक्षेप रहेकोमा आ.व. २०७०/०७१ मा ३१ दशमलब ६७ प्रतिशतले बृद्धी भई २ अर्ब ८५ करोड २९ लाख ५८ हजार ३ सय ६ रुपैंया पुगेको छ ।
कर्जा लगानी तर्फ आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख ६९ हजार १ सय ८८ रुपैया रहेकोमा, चालु आ.व. मा २८ दशमलब ११ प्रतिशतले वृद्धी भई २ अर्ब ९ करोड ८० लाख ७३ हजार ४ सय ७७ रुपैया पुगेको छ । शेयर पूँजी तर्फ २०६९/०७० को कुल शेयर पूँजी २४ करोड ७७ हजार ४ सय मात्र रहेकोेमा आ.व. २०७०/७१ मा ६ दशमलब ८६ प्रतिशतले बृद्धी भई २५ करोड ६५ लाख ५३ हजार ४ सय रहेको छ ।
२०५६ साल भाद्र १८ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भई २०५६ असोज १५ गतेबाट आफ्नो कारोबार सुरु गरेको यस संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा संस्थाको मुख्य लगानीमा संचालित श्री लालीगुराँस राष्ट्रिय उच्च मा.वि./कलेज प्रा.लि. मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सो संस्थाले आ.व. ०६६/६७ देखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट संचालित चिकित्सा शास्त्र बिषयमा स्नातक तह एम.वि.वि.एस.मा अध्यापन गराउन साझेदारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखा जिल्लाको अति दुर्गम क्षेत्रबाट यस संस्थाको सहयोगमा एक छात्रलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराईएको छ । संस्थाको मुख्य लगानीमा संचालित लालीगुराँस हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा.लि. सातदोबाटो ताल्छिखेलमा प्रत्येक महिनाको १ पटक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।